Maxaa ka jira in Lacagaha Ingiriisku Soomaaliya ugu deeqay in badankood gacanta Shabab ku dhacaan? « BredaNews
Maxaa ka jira in Lacagaha Ingiriisku Soomaaliya ugu deeqay in badankood gacanta Shabab ku dhacaan?
462 Views Date February 24th, 2014 time 1:38 pm
Warbixin dheer oo lagu qoray wargeyska Daily Mail ee kasoo baxa wadanka Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay in lacag dhan 9 million oo bound oo ah lacagta Ingiriiska oo Soomaaliya loofu talo galay in badi
ay gacanta u gashay Xarakadda Al-Shabab oo Soomaaliya ka aas aasan.
Warbixintaan oo dhinacyo badan soo xiganaysa ayaa waxaa lagu sheegay in lacagaha deeqaha ah ee Soomaaliya la siiyo ay sidoo kale gacanta loo galiyo dhaq dhaqaaqa Al-Shabab oo la dagaalama dawlada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Wargeysku waxaa uu sheegay in Al-Shabab ay heleen malaayiin ka mid ah lacagta 9 million ee dawlada Ingiriisku ugu talo gashay gar gaarka Soomaaliya taasoo badi loo adeegsaday dagaalka Soomaaliya ka socda.
Lacagtaan oo ay dawlada Britain soo marsiisay hay’ado samafal oo aan magacyadooda la shaacin ayaa waxaa la sheegay in Al-Shabab u adeegsadeen weeraro ay ka geysteen meelo ka mid ah Soomaaliya iyo
wadamada dariska ah sida warbixintaan lagu yiri.
Warbixintaan maanta lagu daabacay wargeyska Daily Mail waxaa lagu sheegay in hay’adaha samafalka lagu qasbay inay lacag cadaan ah siiyaan Al-Shabab si ay uga shaqeeyaan gobolada Shababku Soomaaliya ka maamulo waxaana ay arrintaan soo socotay tan iyo sanadkii 2011 xilligaasoo qeybo ka mid ah Soomaaliya ay abaari ka dilaacday.
Al-Shabab ayaa warbixinta lagu sheegay inay sidoo kale qaateen raashin gar gaar ahaa oo lagu qiyaasay inuu ku kacayay lacag dhan 500,000 oo bound.
Warbixintaan lagu qoray wargeyska Daily Mail waxaa iska diiday oo sheegay inaan cadeyn loo heynb afhayeen u hadlay waaxda hormarinta caalamiga ah ee dalka Ingiriiska hase ahaatee Xog’hayaha waaxdaas Justine Greening ayaa sheegay inay Soomaaliya ku taageeraan sidii looga saari lahaa dhibaatada argagixisadu ku haysyo maadaama uu yahay dal xiriir la leh Ingiriiska.